भजनसंग्रह 14 ERV-NE;NIV - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 13भजनसंग्रह 15
भजनसंग्रह 14 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
प्रमुख संगीतकारलाईः दाऊदको भजन।
14 मूर्ख मानिसले मात्र आफ्नो हृदयमा भन्छ, “ईश्वर छैन।”
मूर्ख मानिसहरूले अनैतिक र घिनलाग्दा कामहरू गर्छन्।
ती मध्ये एउटा पनि राम्रो काम हुँदैन।
2 परमप्रभुले ज्ञानी मानिसहरू कोही छन् भनेर
स्वर्गबाट तल हेर्नुहुन्छ।
ज्ञानी मानिसहरूले सहयोगको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्छन्।
3 तर सबै मानिसहरू परमेश्वरबाट विमुख भएर टाढिए
र दुष्ट भइसके।
कुनै एकजना मानिसले पनि
राम्रो काम गरेको छैनन्।
4 दुष्ट मानिसहरूले मेरो प्रियजनहरूलाई नष्ट गरिसके अनि ती दुष्ट मानिसहरू परमेश्वरको विषयमा जान्दैनन्।
दुष्ट मानिसहरूका लागि खानलाई प्रशस्त खाद्य छ,
तर पनि तिनीहरूले परमप्रभुलाई सम्मान गर्दैनन्।
5 दुष्ट मानिसहरू प्रशस्त भयग्रस्त छन्।
किनभने ती गरीब मानिसहरू परमप्रभु परमेश्वरका भक्तजनहरू हुन्।
6 दुष्ट मानिसहरूले ती गरीब मानिसहरूबाट कुनै सल्लाह लिन मान्दैनन्।
तर परमेश्वर सधैँ ती असल मानिससँग हुनुहुन्छ।
7 सियोनमा इस्राएललाई बचाउने को छ?
परमेश्वर बाहेक कोही पनि छैन!
परमप्रभुका मानिसहरूलाई लगियो अनि कैदी बनाइयो।
तर परमप्रभुले आफ्ना भक्तजनहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हुनेछ,
तब याकूब (इस्राएल ) खुशी हुनेछ।